Igumbi eliphindwe kabini elinesitayile
Indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa yonke sinombuki zindwendwe onguMarek
Igumbi eliphindwe kabini kwiflethi enesitayile iVlnka enepuli kunye nekhefi (ngexesha lonyaka ngoMeyi ukuya ku-Okthobha) ibekwe kwiimitha ukusuka eSľňava Lake ePiešťany. Ilungele iintsapho ezinabantwana, izinto ezininzi ekufanele zenziwe kwindawo, ukukhwela ibhayisekile, ukutyibiliza emgqeni kunye nokutyibiliza emanzini, i-spa eshushu.
I-Vlnka yihotele yosapho enesitayile ekwindawo yolonwabo ekwimitha nje embalwa ukusuka kwidama lase-Sľňava e-Piešťany. I-Vlnka ngoku isebenza kwiiflethi ezicetyiweyo ezisibhozo ezinemixholo eyabelana ngemo yamanzi.
Iindwendwe zinokufikelela ngokupheleleyo kumanzi anetyuwa, iqula lokuqubha elishushubezeliswe lilanga, ikhefi, igadi kunye nendawo yokudlala yabantwana. Ukupaka kunye ne-Wi-Fi simahla. Ukurentisa ibhayisekile kuyafumaneka. (Iphuli kunye neCafé ngoMeyi-Septemba kuphela)
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Banka